Tsime remwenje - FL410 / FL411
Kubva pakutanga, Eurborn anga achitevedzera hunhu hwe "kuvhurika uye kusasarura, kugovana nekuwana, kutsvaga kugona, kugadzira kukosha", kutevedzera bhizinesi uzivi hwe "kutendeka uye kugona, kutungamira maitiro, nzira yakanakisa, vharafu yakanakisa ". Tinotenda ...
Mwenje yeEurborn Inground - Ita kuti hupenyu hwako huve nani
Eurborn agara achitevera mweya webhizinesi we "Hunhu, Kushanda, Kugadzira, uye Kuvimbika". Eurborn ine dhipatimendi rayo rekuumba uye tekinoroji yekutsvagisa nekusimudzira dhipatimendi. All maumbirwo anogadzirwa pachawo, saka inogona kuchengetedza chigadzirwa dhizaini nguva uye c ...
CHIEDZA CHEMAI - Mhuri Boka
ML1021, PL021, PL023, uye PL026 ndeimwe yakakurumbira mitezo yemhuri. Kubva pane chinyorwa, iwe unogona kuona iyo kutaridzika kubva kudiki kusvika kune huru zvakanyanya intuitively. Simba iri kubva ku1W kusvika ku6W yesarudzo yako. Ichi chigadzirwa chinotungamira, saka chinonyanya kushandiswa kujekesa iyo focu ...
BL100-Yako Yachting Mwenje Sarudzo
Kubatanidza yemhando yepamusoro uye zvishandiso, akangwarira manejimendi, anonzwisisika mutengo ma tag, rutsigiro rwakanakisa uye nekuchenjera kubatana pamwe nevatengi, isu tanga tichitsvaga kupa vatengi vedu zvakanakisa kutevedzera zvigadzirwa. Zviri ins ...
Rega iyo greening uye yekushandira nharaunda zvibatanidze
Eurborn agara akazvipira kuchengetedza zvakatipoteredza. Mukona yega yega pahofisi yedu, zvirimwa zvakasiyana siyana zvinoiswa. Chikamu chine musoro ndechekuti chirimwa chese chakambosiiwa uye chakazodzoreredzwa nemaneja wedu kuti chibvumidze kuti vazvarwe zvakare mukana ...
Nyeredzi zvigadzirwa - GL116 muvhu mwenje
Kuzivisa kwedu kupisa-kutengesa Mhuri-set magetsi, GL116, GL116C, GL116H, GL116Q, GL116SQ. Chikamu, uye pane 1W, 1.3W, 3W, 3.5W simba raunosarudza. Panguva imwecheteyo, kuitira kuti igadzirise kune akasiyana mashandisiro enharaunda, inogona kudzorwa neRGB kana DM ...
Chiedza Chepasi-GL112 Chiziviso
Nezve pasi pevhu / pasi pemvura mwenje GL112, unokwanisa kusarudza simba re0.5W, 1W kana 1.3W yemwenje wakavigwa GL112. Izvo zvinhu zvechigadzirwa zvakagadzirwa nesimbi yegungwa isina simbi 316. Yakashongedzwa neCREE matare emwenje anotengeswa kubva kuUnited States ...
Eurborn - Fire drill, tora matanho
Ipo Eurborn ichitarisa kugadzirwa kwemwenje dzakasiyana siyana, kusanganisira In-pasi mwenje, Wall mwenje, Spike mwenje, nezvimwewo, Eurborn haafanire kufuratira kuchengetedzeka kwevashandi. Naizvozvo, kuitira kuvandudza ruzivo rwevashandi nezvekuchengetedza, Eurborn akaronga kuboora moto musi waApril 20 ...
Renewable zviwanikwa Eurborn hanya nezvayo
Eurborn yakagara ichisimbisa kukosha kukuru kune izvo zvinowanikwazve zviwanikwa zvezvinhu. Isu takagara tichikoshesa chipo chechisikirwo kuvanhu. Kune yedu yekunze isina simbi simbi mu-pasi mwenje uye kutungamira kwemwenje kwe LED, isu takazvipira kugadzira zvigadzirwa zvedu mo ...
Laser logo yeIn-pasi mwenje
Munguva yakapfuura, zviratidzo pazvigadzirwa zvaimakwa neingi jet coding, asi kudhinda kweinki hakusi nyore chete kupera, asi zvakare zvine hushamwari-nharaunda. Iyo zvakare inogadzira inokuvadza gasi ...